I-Iran Marketing Promotion and Cooperation Exchange
Ngentambama kaSepthemba 29, umhlangano we-inthanethi wokukhuthaza nokuthengisa wabanjwa ngempumelelo ne-Iran MGCE Company. Le yingxoxo yokuqala esemthethweni online neMahab Ghodss Consulting Engineering Company, sonke besilinde isikhathi eside. Le participa ...
Umbukiso wokuqala weXinjiang International Water Conservancy Technology Exposition uvulwe kahle
Kusukela ngoSepthemba 9 kuya ku-10, 2021, kwavulwa kahle kakhulu i- "Xinjiang International Water Conservancy Technology Expo" eXinjiang International Convention and Exhibition Centre. Lo mbukiso, oholwa nguMnyango Wezinsizakusebenza Zamanzi waseXinjiang Uygur Autonomous Reg ...
I-BIC iwine ibhidi yephrojekthi yokwakhiwa nokufakwa kwedamu lenjoloba eBangladesh
Muva nje, sithole isaziso sethenda mayelana nephrojekthi yokwakhiwa nokufakwa kwamadamu enjoloba yaseBangladesh. Le phrojekthi iphrojekthi enkulu kunazo zonke yedamu lenjoloba eBangladesh. Umsebenzi uqukethe Ukwakhiwa kweDamu leRubber elide elingama-353m ukunqamula uMfula iMahananda eSadar Upzila weChapainawabganj D ...
UHLELO LWE-IWHR 14TH 'LEMINYAKA EMIHLANU'
Muva nje, i-IWHR ihlele umhlangano wokubuyekezwa kochwepheshe wecebo le-14 leminyaka emihlanu 'lamaThalente amahlanu'. Ikomidi lokuhlola linamalungu angaphezu kwama-40, kufaka phakathi abaholi be-IWHR, izifundiswa, izinhloko zeminyango (izikhungo), abaholi bamabhizinisi angaphansi kobuchwepheshe obuphakeme neminyango esebenzayo, kanye ...
ANSYS inkambo yokuqeqeshwa kwenethiwekhi yesoftware
Ukuze uqhubeke ngokuthuthukisa isimo sokufunda samakhono ocwaningo lwesayensi futhi ukhuthaze ukufundwa nokuxhumana kwesoftware, i-IWHR isanda kubamba inkambo ka-2021 ANSYS Software Application Network Training, ebibandakanya kakhulu amamojula weCFD neMechanical of ANSYS sof ...
Ingqungquthela Yokuqeqesha Abangaxhunyiwe Ku-inthanethi Edamini Eliphakanyisiwe Lomfutholuketshezi
Ngo-Agasti 17th, umqondisi woMnyango Wezokusebenza waqhuba ukuqeqeshwa kokuthengisa kweHydraulic Elevated Dam. Emhlanganweni wokuqeqeshwa, imikhiqizo yokwenziwa kweDamu leHydraulic Elevated yethulwe okokuqala futhi okwesibili, imininingwane yezobuchwepheshe namathemba okusebenzisa weHydraulic Elevat ...
I-R & D Yezindlu Zangasese Ezihlanzwayo Ezizishintshayo
Amanzi ageleza ngamanzi ahlanzekile azisebenzisela ukuphathwa kwendle okungenabungozi nokulinganiselwe kwendle kanye nendle ehlanzwa ngamaloli okuthuthwa kwendle futhi iphinde isetshenziselwe ukugeza izindlu zangasese. Ngakho-ke, umthamo wokukhishwa kwamathoyilethi angomahamba nendlwana athuthelwa endaweni yokulungisa umquba ...
Uhlobo olusha lwensimbi yokuncibilika neyokulahla （MDD）
I-BIC ithuthukise uhlobo olusha lwedivayisi yokuncibilika eyenza i-micro nano melting & deicing device. Ngisho nasebusika obunzima obubandayo, ngeke yakhe ungqimba lweqhwa, oluxazulula ngempumelelo inkinga efriziwe phambi kwe-sluice. Okwamanje, le divayisi futhi ingasetshenziswa ne-BIC's HED (Hy ...
Ukunqoba iphrojekthi entsha, ukugqama okusha kokuklanywa
Muva nje, i-BIC inqobile ukuqhudelana ngamadamu amabili e-elevator esifundeni saseJilin, eChina. I-HED eyodwa ingu-170m ubude no-2.5m ukuphakama; enye i-HED ingu-186m ubude no-2.5m ukuphakama. Ama-HED amabili akhelwe ukwakheka kwezindawo zasemadolobheni ngomklamo omuhle wokukhanyisa. Okunye ukugqama kokuklama kwalezi ezimbili zokubacindezela ...
Iphrojekthi yedamu elenziwe lula eLishu
Ngo-Okthoba 2020, inkampani yethu yathatha iphrojekthi yokuthuthuka kwezobunjiniyela i-Simplified Elevated Dam (SED) engxenyeni esemadolobheni eZhaosutai River tributary eLishu County. Le phrojekthi inama-SED ayisihlanu, eyodwa yawo ingu-10m ubude no-1.5m ukuphakama, inephaneli elilodwa lika-3.33W * 1.5mH, ...
UXi uthumela umyalezo wokugubha ikhulu leminyaka lokuzalwa kukababa waseBangladeshi, iminyaka engu-50 yokuzimela
UMongameli wase-China u-Xi Jinping uthumela umyalezo we-video emcimbini owenziwe yi-Bangladesh ukukhumbula iminyaka eyikhulu yokuzalwa kukababa wayo owasungula uSheikh Mujibur Rahman, futhi nokugubha iminyaka engu-50 izwe lathola inkululeko ngo-Mashi 17, 2021. Egameni le-Chine ...
Sikufisela usuku oluhle lwabesifazane International
Ukukhuthaza Nokusebenzisana Kwe-Iran ...
IXinjiang International Water Co yokuqala ...
I-BIC iwine isicelo se-Bangladesh BWDB rubbe ...